Fedora SCP protocol ကိုကန့်ကွက်ရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်အဆိုပြုထားသည် Linux မှ
Jakub ဂျယ်လီ (Red Hat လုံခြုံရေးအင်ဂျင်နီယာ) SCP protocol ကိုပေါရာဏအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အကြံပြုခဲ့သည် နောက်ပိုင်းတွင်၎င်း၏ဖျက်သိမ်းရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။ အဖြစ် SCP သည် RCP နှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီးဗိသုကာဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအမွေဆက်ခံသည် ဖြစ်နိုင်ခြေအားနည်းချက်များ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းအခြေခံ။
အထူးသဖြင့် SCP နှင့် RCP တို့တွင်၊ ဆာဗာသည်မည်သည့်ဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုမည်သူထံပေးပို့ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ client သည်ဆာဗာ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပြီးပြန်လာသောအရာဝတ္ထုအမည်များ၏မှန်ကန်မှုကိုသာစစ်ဆေးသည်။
တိုက်ခိုက်သူမှထိန်းချုပ်သောဆာဗာတစ်ခုသို့ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်၊ server သည်အခြားဖိုင်များကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အရာထပ်တလဲလဲအားနည်းချက်များ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းမှ ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မကြာသေးမီအချိန်အထိ၊ သုံးစွဲသူသည်လက်ရှိလမ်းညွှန်ကိုသာစစ်ဆေးသည်။ ဆာဗာသည်မတူညီသောနာမည်နှင့်ဖိုင်မတောင်းဆိုသောဖိုင်များကိုထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိခဲ့ပါ (ဥပမာ - "test.txt" အစား) တောင်းခံသည်ဆာဗာ» bashrc «ဟုခေါ်သောဖိုင်တစ်ခုပို့နိုင်သည်။ ၎င်းကို client မှရေးသားလိမ့်မည်။
Jakub Jelen ထုတ်ဝေသော post တွင်အောက်ပါတို့ကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ Fedora အသုံးပြုသူများ! မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း SCP protocol တွင်ပြissuesနာများစွာရှိခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုကန ဦး အဆင့်များတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုဆွေးနွေးရန် ဦး ဆောင်နေသည်။
အသံအများစုက SCP ကိုရိုးရိုး ad-hoc ကော်ပီများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ အကြောင်းမှာ sftp သည်ဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုကူးယူရန်ရိုးရှင်းသောကြားခံတစ်ခုမပေးသောကြောင့်၊ လူများသည် sftp အစား scp ရေးရန်အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
SCP protocol နှင့်ပြproblemနာနောက်တစ်ခုမှာ argument processing feature ဖြစ်သည်.
ဒါကြောင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကတည်းက ပြင်ပဆာဗာသို့ဖိုင်များကိုကူးယူသောအခါဖိုင်လမ်းကြောင်းသည် scp command ၏အဆုံးတွင်တွဲထားသည် ဥပမာ - local တွင်ဥပမာ၊ သင်သည်ဆာဗာတွင်“ scp / sourcefile remoteserver: 'touch / tmp / exploit.sh` / targetfile' "ကို run သောအခါ command » touch / tmp / exploit.sh »နှင့်ဖိုင် / tmp က /exploit.sh ကိုဖန်တီးလိုက်သည်၊ ထို့ကြောင့် scp ၌မှန်ကန်သော escape character များကိုသုံးရန်အရေးကြီးသည်။
scp ကိုဖိုင်အမည်များတွင် '`' အက္ခရာများကိုလက်ခံသည့်ဖိုင်စနစ်များရှိ directory များ (" -r "option) ကိုအပြန်အလှန်ပေးပို့ရာတွင်တိုက်ခိုက်သူတစ် ဦး သည် apostrophes ပါသောဖိုင်တစ်ခုကို ဖန်တီး၍ ၎င်းကိုကုရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
OpenSSH တွင်ဤပြproblemနာသည်မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ။ နောက်ပြန်ကိုက်ညီမှုကိုမချိုးဖောက်ဘဲဖြေရှင်းရန်မှာခက်ခဲသည်။ ဥပမာ - command မလုပ်မီ directory ကိုကူးယူခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးရန်။
ယခင်ဆွေးနွေးမှုများအရ scp သည်ယေဘုယျအားဖြင့်စနစ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ဖိုင်များကိုကူးယူရန်အသုံးပြုသည်။
သို့သျောလညျး ပိုမိုလွယ်ကူသော interface ကြောင့်လူများစွာသည် sftp အစား scp ကိုအသုံးပြုကြသည် နှင့်ဖိုင်များကိုကူးယူရန်သိသာ, ဒါမှမဟုတ်ရုံအလေ့အထထဲက။ Jakub သည် scp utility ၏ပုံမှန်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၊ SFTP protocol ကိုအသုံးပြုရန်ပြောင်းလဲခြင်း (အထူးကိစ္စရပ်များအတွက်၊ SCP protocol သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်“ -M scp” option ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်) သို့မဟုတ် sftp utility သို့လိုက်ဖက်သော mode ကိုထည့်သွင်းရန်အကြံပြုသည်။ SCP အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်အစားထိုးတစ်ခုအနေဖြင့် sftp ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် scp အတွက် SFTP ကိုအတွင်းပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန် (-M scp ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်) patch တစ်ခုကိုရေးခဲ့ပြီးအချို့သောစမ်းသပ်မှုများတွင်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
အပေါ်ယံတုံ့ပြန်ချက်များမှာအတော်လေးကောင်းမွန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများထံမှလည်းကြားချင်ပါသည်။ သူ၌အကန့်အသတ်များရှိနေသေးသည် (ပံ့ပိုးမှုပျောက်ဆုံးနေသည်၊ ဆာဗာသည် sftp subsystem ကိုအသုံးမပြုလျှင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း) အသုံးအများဆုံးကိစ္စများတွင်လုံလောက်သင့်သည်။
အကန့်အသတ်များအကြား အဆိုပြုထားချဉ်းကပ်မှု၏ sftp subsystem ကိုမစတင်သောဆာဗာများနှင့်ဒေတာဖလှယ်မှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ နှင့်ဒေသခံအိမ်ရှင်မှတဆင့်အကူးအပြောင်းနှင့်အတူပြင်ပအိမ်ရှင်နှစ် ဦး အကြားလွှဲပြောင်း mode ကို (mode ကို "-3") ၏မရှိခြင်း။ အချို့သောသုံးစွဲသူများက SFTP သည် bandwidth အနေဖြင့် SCP အနည်းငယ်နောက်ကျသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။
စမ်းသပ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာ openssh package ကို copr repository တွင်ထည့်ပြီးပြီ၊ ၎င်းသည် SFTP protocol မှ scp utility ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၎င်းကိုပြင်ဆင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » သူတို့က Fedora SCP protocol ကိုကန့်ကွက်ရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်အဆိုပြုထားသည်
"twilio-npm" အဖြစ်ဖုံးကွယ်ထားသည့်အပြင်နောက်ကွယ်မှလူများအတွက်လမ်းခင်းပေးသော npm package တစ်ခု